HERE a na-akpọzi Maapụ HERE WeGo | Akụkọ akụrụngwa
Otu n’ime ọrụ ole na ole Nokia hapụ ire ere na Microsoft bụ maapụ ụlọ ọrụ Finnish. Ọrụ maapụ a, nke ka na-ewu ewu dị ka Google Maps taa, ji nwayọ na-eme ka ọdịiche dị n'etiti ndị ọrụ site na ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ. Themụ okorobịa nọ na Nokia chọrọ ịmaliteghachi ngwa map ha na nke ahụ oge ka mma iji mee ya n'oge nke afọ nke otutu mmadu bu ndi na-aga ezumike na ugbo ala, ma obu na-aga njem igwe kwụ otu ebe, ịga ije n’obodo ha na-eleta ...
EBE a emelitere Maps gam akporo ngwa a na-agbakwunye na-agbakwunye atụmatụ ole na ole iji mee ka ọrụ ya nwee asọmpi Ọ bụrụ na ị chọrọ iji onwe gị ka ịlele onwe gị ka ị pụrụ ime ihe nile Google Maps. Mana ihe kachasị dị egwu banyere mmelite a bụ aha mgbanwe ọ natara. Ugbu a ka akpọgharịrị HERE WeGo.
Mgbe mmelite ohuru ahụ, ihe mbụ anyị ga - ahọrọ bụ ụzọ nke ịkwaga iji kwaga. Dịka iwu n'ozuzu, anyị ga-eji ụgbọ ala, yabụ ozugbo anyị banyere adreesị ọhụrụ ahụ, ngwa ahụ ga-egosi anyị ngwa ahụ ọsọ ọsọ na enweghị ụtụ, ma ọ ga-egosikwa anyị ụzọ ndị ọzọ nke gunyere ụtụ na ụgwọ nke otu ihe ahụ na oge njem njem anyị ka anyị nwee ike iji ya tụnyere ụzọ mbụ ọ nyere anyị.
Mmelite a na - enyekwa anyị ohere ịhọrọ dị ka ụzọ eji ebu igwe ma ọ bụ ụgbọ ala ejikọtara ọnụ, na ebe ebe ọ dị, na - enye anyị ego ole njem anyị ga-efu. Maka ya eruola nkwekọrịta na BlaBlaCar na Car2Go, ọrụ abụọ na-enye anyị ohere ịkekọrịta ụgbọ ahụ iji mee njem njem n'otu ụgbọ ahụ. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga njem site na iji ụgbọ njem ọha, ngwa ahụ ga-enyekwa anyị ọnụahịa nke tiketi ahụ dịka usoro njem anyị họọrọ.
Ebe a WeGo: Maapụ na Ntugharị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » HERE a na-akpọzi Maapụ HERE WeGo
Vidio mbụ nke Galaxy Note 7 na-eme ihe